Home Home Soomaali lagu dilay Koonfur Afrika
Soomaali lagu dilay Koonfur Afrika
Kooxo burcad Koonfur Afrikan ah ayaa xalay Gudaha dalkaas waxa ay ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsada dalkaas, xilli uu ku jiray howshiisa Shaqo.
Kooxda ayaa ku weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Abuukar Cilmi Juuni Goob Ganacsi oo uu dhawaan ka Shaqa bilaabay taas oo ku taalla Magaalada Cape Town ee Wadanka koonfur Afrika.
Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay in muwaadinka la dilay uu dalkaasi ku noolaa mudo 10 Sano ah, hayeeshee Goobta Ganacsi ee lagu dilay uu ka howlgalayay mudo Afar Cisho ah kaliya, isla markaana uu rajeynayay in uu dib ugu soo laabto Soomaaliya.
Kooxa Burcada aheyd ee dilka geysatay ayaa Goobta ka baxsatay,waxaana Meydka Muwaadinka Soomaaliyeed Goobta ka qaaday qaar ka mid ah Ganacsatada Soomaalida oo deris la ahaa Ninka la dilay.
Dalka Koonfur Afrika ayaa sanadkan 2019 waxaa kusoo kordhay dilalka loo geysanayo Soomaalida ku Ganacsata,waxaana weli jirin cid isku-dayday inay ka hor tagto dilalkaas ee labada dal ee Soomaaliya iyo Koonfur Afrika.
Previous articlesafaarada Jabuuti ee Muqdisho oo xariga laga jaray
Next articleTahriibayaal u dhashay qowmiyada Oromada ee Itoobiya oo gaaray Boosaaso
Villa Somaliya oo war Wanaagsan ka soo Saartay Dhallinyaradii ku Xanninneyd Erateriya.
Ma Dr Beyle ayaa Sharciga ka weyn Misa Xeer Ilaalinta ayaan Shaqadeeda Aqoon?
Qarax dad Muslimiin ah lagu Dilay oo ka Dhacay Hiiran.
Trump Oo markale Ilhaan Cumar ka dalbaday in ay xilka isaga...
Madaxweyne Xaaf ”meesha aad weerarteen waa dhulka galmudug mana idinka aqbali...